विवाहेतर सम्बन्धले बढायो अपराध
शनिबार, १४ बैशाख २०७६
तस्बिरः फिरोज खान हत्याकी योजनाकार साहिन खातुन।
प्रदेश नम्बर ५ मा पछिल्लो छ महिनामा चार वटा हत्याका घटना भएका छन्। विवाहेतर सम्बन्धका कारण यस्ता अपराध बढी हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ।
बुटवल मैनाबगर बस्दै आएका फिरोज खानको जीवन सुखद नै थियो। करिब २० वर्षअघि भारतको बिहारबाट नेपालमा रोजगारीका लागि पसेका उनी गाडीहरूमा सुनौला रङ भर्थे। उनी ज्योति इन्जिनियरिङका हेड मिस्त्री थिए। बिहानै जागिरमा जानु, काम गर्नु, साझ घर फर्किनु उनको दिनचर्या थियो। बुटवल आएपछि उनले साहिन खातुनसँग बिहे गरे। दुई छोरा रहिन र राहेशसँगै उनको जीवन रमाइलै थियो।
चैत १२ गते भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल लिएर साढु दाइ (श्रीमतीका भिनाजु) उनका घर आएका थिए। घरमा छोराहरू थिए, श्रीमती थिइनन्। फिरोज सधैँजस्तै कामबाट घर फर्किए। तर, घरभित्र पस्न पाएनन्। साँझ घरको ढोकामा नपुग्दै कसैले पछाडिबाट अँगालो हालेजस्तै ग¥यो। उनको ढाडमा गोली चल्यो।
पछाडिबाट हानिएको गोली छाती छेड्दै बाहिर निस्कियो। रगतको आहाल बग्यो। फिरोज छिनभरमै भुइँमा ढले। छोराहरू चिच्याउँदै बाहिर निस्किए। छिमेकीहरू जम्मा भए। अस्पताल पु¥याउँदा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टरले उनलाई मृत घोषणा गरे। अस्पताल नपुग्दै उनले प्राण त्यागिसकेका थिए।
फिरोजको हत्या किन र कसरी भयो ? पत्ता लगाउन प्रहरीले ढिला गरेन। सबैभन्दा पहिला प्रहरीले उनकी श्रीमती साहिन खातुन हुन सक्ने लख काट्यो। उनीविरुद्ध प्रमाणसमेत फेला परे। कहिल्यै श्रीमतीसँग झगडा नगर्ने फिरोज तिनै श्रीमतीबाट मारिए। कारण थियो, साहिनको भिनाजुसँग प्रेम सम्बन्ध। प्रहरीले साहिनको मोबाइल हे¥यो।
भिनाजुलाई कल गरिएका केही नम्बर डिलिट भइसकेका थिए। केही नम्बरले शंका देखायो। कल डिटेल हेर्दा यिनीहरूको सम्बन्ध लामो समयदेखि रहेको भेटियो। भिनाजु कादिर अन्सारीले साहिनकी दिदीको मृत्युपछि सालीतर्फ आँखा लगाएका थिए। फिरोजको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै साहिन र कादिरको प्रेम प्रसंग चल्यो। प्रेमलाई सफल बनाउन उनीहरूले निर्दाेष फिरोजको हत्या गर्ने षड्यन्त्र रचे।
अहिले साहिन जेलमा छिन्। कादिर फरार छन्। प्रदेश ५ प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार फिरोज खानकै जस्तै तीन हत्या पछिल्लो दुई महिनामा भएका छन्। प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक टीकाबहादुर कार्कीका अनुसार फिरोजको हत्या श्रीमती र श्रीमतीका भिनाजुको पूर्व योजनाअनुसार गरिएको अनुसन्धानमा भेटिएको छ। हत्यामा संलग्न ३५ वर्षीय कादिर अन्सारी फरार रहेको र खोजतलास भइरहेको छ।
फिरोजका नाबालक दुई छोरा भारतको बिहार फर्किए। साली–भिनाजुको अनैतिक सम्बन्धले फिरोजको ज्यान लियो। योे एउटा घटना मात्र हो। प्रदेश नम्बर ५ मा पछिल्लो छ महिनामा यस्तै चार वटा हत्याका घटना भएका छन्। विवाहेतर सम्बन्धका कारण यस्ता धेरै अपराध भएका छन्।
यस्ता अपराधमा साना हतियार प्रयोग बढी भएको पाइएको छ। पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर ५ का तराई जिल्लामा बढेको साना हतियारको प्रयोगले अपराध फेरि मौलाएको संकेत गरेको छ। वारि गोली हान्ने र पारि लुक्ने प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको छ। सुरक्षा निकायले खुला सीमानालाई दोष दिँदै आएको छ। कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक अच्युतमप्रसाद पुडासैनी खुला सीमा, सीमित सुरक्षा जनशक्ति र कमजोर उपकरणका कारण अपराधी हतियारसहित नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको बताउँछन्।
श्रीमान्कै निर्देशनमा फागुन ११ गते कपिलवस्तुका बाणगंगाकी अनीता पौडेलको हत्या भयो। पौडेलको घरमा दुई व्यक्ति पाहुनाका रूपमा पसे। अनीताले उनीहरूलाई मासुभात पकाएर खुवाइन्। ती दुई व्यक्तिले आफ्नो जन्मदिन भन्दै अनीताका दुई छोरा र छोरीलाई केकसमेत खुवाए। केकसँगै जुस पनि खान दिएको अनीताकी नौ वर्षीया छोरीले प्रहरीलाई बताएकी छिन्।
केक र जुस खाएपछि तीन बालबालिका बेहोश भए। उनीहरू भोलिपल्ट बिहान उठे तर अनीता कहिल्यै नउठ्ने गरी सुतिरहिन्। पाहुना आएकाहरूले उनको हत्या गरे। अनीताको निधार र टाउकोमा गम्भीर चोट थियो। उनीमाथि धारिलो हतियारले प्रहार गरेको प्रहरीको भनाइ छ।
ती दुई पाहुना अरू कोही नभई भिनाजु श्रीहरि गौतम र आफन्त पर्ने गुनाखर गौतम थिए। उनीहरू अनीताका श्रीमान् विष्णु पौडेलको आग्रहमा उनको हत्या गर्न आएका थिए। अनीताको हत्या भएको करिब डेढ महिनापछि प्रहरीले यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। सम्पत्तिको लागि उनको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक अनीता र उनका श्रीमान्बीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो।
विष्णु सम्बन्ध–विच्छेद गर्न चाहन्थे तर अनीताले त्यो कुरा अस्वीकार गर्दै आएकी थिइन्। अनीताको नाममा केही सम्पत्ति थियो। विष्णुले भारतमै अर्काे विवाह गरेका थिए। त्यो सम्पत्ति कान्छी श्रीमतीलाई दिन उनले अनीतको हत्या गरे। आमाको हत्यापछि तीन नाबालक बेसहारा बनेका छन्।
पाल्पा रिम्दीकोटकी ५० वर्षीया ओमकुमारी घर्तीको पनि त्यसै गरी हत्या भयो। उनको हत्या पनि प्रेम प्रसंगकै कारण भयो। उनी स्थानीय ४६ वर्षीय नुरबहादुर विश्वकर्मासँग प्रेममा थिइन्। नुरले उनलाई प्रयोग मात्रै गरिरहेका थिए तर घर्ती भने बिहे गर्न चाहन्थिन्। उनले बिहे गर्ने दबाब दिन थालिन्। नुरले उनलाई भागेर बिहे गर्ने प्रलोभन दिए। भेट्न जाँदा नुरले ओमकुमारीको हत्या गरे। उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।
चैत १७ गते कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं. १० विद्यानगरका पारस पुरीको गोली हानी हत्या भयो। म्यानपावर व्यवसायीसमेत रहेका उनीमाथि राति ९ बजे गोली चलेको थियो। रूपन्देहीको देवदहमा २२ वर्षीय अनिस पुरीको हत्या भयो।
यी हत्या अपराध प्रेम सम्बन्ध र छिटो पैसा कमाउने सोचका कारण भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिलबहादुर मल्ल बताउँछन्। भन्छन्, ‘छिटो पैसा कमाउने लालचले समाजका कतिपय व्यक्ति अपराधमा होमिएका छन्। त्यस्तै, विवाहेतर प्रेम सम्बन्ध कारण पनि धेरै हत्या हुने गरेका छन्।’
प्रेमी नै हत्यारा
२१ चैत २०७५
लास्ट सिटमा अश्लील काण्ड